बामदेव गौतमले पूर्वएमालेका नेताहरूसँग बदला लिने ! | Suchana Daily
अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा हालिमुहाली गर्न थालेपछि गौतम खुसी छैनन् ।
गौतमलाई सक्रिय राजनीतिबाट रोक्न प्रयास पनि भएको थियो । योगेश भट्टराईलगायतका केही नेताहरूले विधानमा उमेर हदको कुरा राख्न सुझाव दिएका थिए । तर, गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीमा उमेर हद राखेर अवैज्ञानिक कुरा गर्न नहुने भनेर विरोध गरेका थिए । ‘योगेश भट्टराईलगायतले हैन, योगेश भट्टराई मात्रैले हो कुरा उठाएको । कुरा त उठाए बस्नेबेला मेरो मुखमा हेरे अनि टाउको निहुराए’, गौतमले प्रतिक्रिया दिने क्रममा भनेका छन् । तत्कालीन एमालेमा ७० वर्ष पुगेका नेताहरूलाई सक्रिय राजनीति गर्न बन्देज लगाइएको थियो । नेकपा गठन भएपछि यो प्रावधान हटेको छ ।
ओली चीन भ्रमणमा जाने बेला गौतमलाई बेवास्ता गरिएको थियो । गौतमलाई कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी नदिएर ओलीले माधवकुमार नेपाललाई दिएका थिए । त्यो कार्यबाट धेरैको मन दुखेको थियो । धोका पाएपनि ओलीलाई कुनै पनि सर्त राखेर आफूले साथ दिएको गोतमले बताउने गरेका छन् । ‘मैले निःस्वार्थ समर्थन गर्दागर्दै पनि उहाँले कतिपय कुरा भन्नु भयो । यसपछि तपाईं हो, यसपछि अब तपाईं हुने हो भन्नुभयो । तपाईंपछि बरु म यो हुने हो आदि जस्ता कुरा उहाँ आफैले भन्या हो’, गौतमले भनेका छन्–‘खासमा मैले गुट कहिलै चलाइनँ ।’
ओलीले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको गौतमले आरोप लगाएका छन् । महँगी नियन्त्रण पनि गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सरकार शक्तिशाली भए पनि काम गर्न नसकेको आरोप गौतमले लगाएका छन् ।
देउवालाई सभापतिबाट हटाउँछौँः महामन्त्री कोइराला
डाक्टरको लापरवाहीले तिन महिने बालकको मृत्यु ॥
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तालिका के – कस्तो छ ? हेर्नुहोस् सार्वजनिक ( सूची)
भाउजूले दाउरा प्रहार गर्दा देवरको मृत्यु
प्यूठानमा मदिरा नियन्त्रण गर्न आचारसंहिता बनाइयो
साउण्ड सिष्टम प्रयोग गरेर देउसी भैलो खेल्न प्रतिबन्ध